Allgedo.com » 2011 » May » 01
Home » Archive Daily May 1st, 2011 Wafti Balaaran oo ka socda UN-ka oo soo gaaray Caabudwaaq. May 1, 2011 Xubnaha wafitigan soo gaaray Degmada Caabudwaaq oo ka socda UN-ka ayaa ka kooban hay’adaha Samafalka laamahooda kala duwan waxaana ay kulan la qaateen wakiilada Hay’adahaasi ay ku leeyihiin bartamaha Dalka Soomaaliya. Waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey Degmada maata waxaaana soo dhawaynta waftiga ka qayb qaatay masuuliyiin ka tirsan maamulka Degmada iyo wakilda hay’adahaasi ay... Tahniyad Dhalasho Wariye Carafaad Aadan ibraahin iyo Ayaan Cabdi Cali May 1, 2011 Waxaa tahniyadaan diraya bahda warbaahinta iyo wariyayaasha Gobolka Galgaduud dhamaantood, gaar ahaana kuwa warbaahinta Radio Caabudwaaq oo uu ka mid yahay Wariye Carafaad Aadan ibraahin.
Wariye yaasha Tahniyadaan diraaya waxaa ka mid ah:
1: C/kariin Axmed Bulxan (fantaastic)
2: Carafaad Aaadan Ibraahin
3: C/wali Xasan jimcaale (cowke)
4: Maxamed faracade
5: iimaan Muuse Maxa’ed
6: Bashiir Yuusuf... Taniyad Meherka C/wali Maxamuud Maxamed (Abdiwali Khamse) iyo Xamdi May 1, 2011 Waxaa tahniyadaan diraya bahda warbaahinta iyo wariyayaasha Gobolka
Galgaduud dhamaantood gaar ahaana kuwa warbaahinta Radio Caabudwaaq oo
ay ka mid ahayd Wariye Xamdi Xasan Takar (Xamdi Xiis)
1: C/kariin Axmed Bulxan
6: Bashiir Yuusuf Maxamed
7: Nadiir C/xakiin Maxamed
8: Nasiib Cabdi Maxamed
9:... Ahlusuna oo sheegtay in ay u tartamayso Madaxtinimada Dowladda KMG ah. May 1, 2011 Ururka Ahlusuna ayaa caawa ku dhawaaqay in ay iskusoo taagayaan xilka madaxtinimada dowladda KMG ah marka lagaaro bisha Agoosta ee bartamaha sanadkan.
Sheekh Cumar Sheekh C/qaadir oo sheegtay in uu yahay gudoomiyaha golaha talada oo caawa wareysi siiyay Idaacadda Shabelle ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Ururkoodu uu isku rabo talada wadanka Soomaaliya.
Mas’uulkan u hadlay Ururka Ahlusuna... EU threatens to cut aid to TFG. May 1, 2011 The European Union, one of the major financiers of Amisom and the Somali Transitional Federal Government, has threatened to cut further support if the current office holders do not relinquish power when their term of office comes to an end in August. This has not gone down well with the East African Community, whose members Uganda and Burundi are providing the boots on the ground in Mogadishu,... Dagaal ka qarxay Beled-Xaawo iyo Madaafiic lagu garaacay Kastamka Mandheera. May 1, 2011 Dagaal ayaa goordhaw oo caawa ah ka qarxay gudaha degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo oo bilihii lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen ciidamo taabacsan dowaladda KMG ah.
Wararka hadda nagas oo gaaraya Beled-Xaawo waxay sheegayaan in rasaas culus ay ka socoto saldhigga Booliska iyo xarunta degmada oo ay ciidamada Al Shabaab weerar ku qaadeen.
Rasaas xoogan ayaa laga maqlayaa gudaha degmada, dadka ku nool... Madaxweyne Shariif oo shaaciyay in Shariif Xasan Madaxtinimada isku rabo. May 1, 2011 Shariif Sheekh Axmed oo hadalasiisa ay xanaaq iyo maadeysi isugu jireen ayaa sheegay in gudoomiyaha baarlamanka uu yahay Ninka kaliya ee doorasho madaxweyne doonaya in xiligan laqabto isagoo iska dhaadhacsiiyay in uu madaxweynaha dowladda noqon doono.
“Isagii ayaa doorasho abaabulaya isaga ayaana musharax u ah qabashada xilka madaxtinimada waxaas miyaa sharci ah, waa in aan sharciga ku dhegnaa... Ciidamo katirsan Dowladda KMG ah oo Muqdisho ku dagaalamay. May 1, 2011 Ciidamo katirsan dowlada KMG ah ayaa maanta ku dagaalamay magaalada Muqdisho kadib markii ay isku qabsadeen lacago ay ka qaateen gaadiidka dadweynaha ee isaga kala goosha degmooyinka Wadajir iyo Dharkeynleey.
Maanta gelinkii dambe ayay ciidamo kawada tirsan dowlada KMG ah dagaal culus isugu geysteen degmooyinka Wadajir iyo Dharkeylneey waxaana jira khasaara ay shacabka ugu geysteen rasaas ay is dhaafsanayeen.
Ciidan... Gedo oo Xasiloon Kadib dagaallo lagu hoobtay oo ka dhacay. May 1, 2011 Xaaladda gobolka Gedo ayaa maanta xasiloon kadib dagaallo culus oo maalmihii lasoo dhaafay ku dhaxmarayey ciidamada Dowladda KMG ah iyo kuwa Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Maanta ma dhicin wax dagaal ah waxayna dhinacyadu u muuqdaan kuwa kala nasanaya oo kala aasanaya ciidankii ay shalay isaga dileen duleedka degmada Garbahaarey ee gobolka Gedo.
Wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helnay Garbahaarey... Alla Gedo Ayaan Daranaa! By Aaden AwXirsi May 1, 2011 Waxaan si naxdin iyo argaggax leh dhawrkii beri ee ina dhaaftay isha ugu hayey xaaladaha dhiillada leh ee ka soo cusboonaadey gobolkeennii Gedo ahaa oo aan aniga iyo dad badan oo kale oo idinka mid ahba meel ay cadceedi ka soo baxdo ugu jeclayn. Gaar ahaan waxaan aad uga damqanayey colaadda iyo abaaraha wadajira ee dadkeenni iyo dhulkeennii waqtigan ba’an ku wada habsadey.
By Aaden AwXirsi
Mahad... Radio Allgedo/ Waraysiyo